ASTM D5621 मानक परीक्षण विधि क्रमशः °० डिग्री सेल्सियस र १०० डिग्री सेल्सियस मा हाइड्रोलिक तरल पदार्थ र आफ्नो चिपचिलोपन को ध्वनि कतरण स्थिरता परीक्षण वर्णन गर्दछ। कतरनी अन्तर्गत हाइड्रोलिक तरल पदार्थको चिपचिप स्थिरता जाँच्न र निर्धारण गर्न, एक विश्वसनीय परीक्षण विधि आवश्यक छ। ASTM D5621 अल्ट्रा-सोनिक कतरनी शक्तिहरूको प्रयोग गरेर हाइड्रोलिक तरल पदार्थको कतराहरूको स्थिरताको मूल्यांकनको लागि एक मानकीकृत प्रोटोकल हो।
ASTM D5621 प्रयोग गरेर हाइड्रोलिक फ्लुइडहरूको अल्ट्रासोनिक शियर स्थिरता परीक्षण
ASTM D5621 ध्वनी कतरन अन्तर्गत हाइड्रोलिक तरल पदार्थको चिपचिपी घाटा निर्धारित गर्न एक standarized प्रोटोकल हो। त्यसकारण, कतरनी स्थिरता मूल्यांकन गर्न अल्ट्रा-सोनिक शियर फोर्सहरू हाइड्रोलिक फ्ल्युडको नमूनाहरूमा लागू हुन्छन्। हाइड्रोलिक तेल र इञ्जिन तेल भएको पॉलिमरको लागि आदर्श।
उद्देश्य: हाइड्रोलिक फ्लुइड (विशिष्ट स्नेहक), ईन्जिन तेल, कारका लागि ट्रान्समिशन फ्लुइड, ट्रयाक्टर फ्लुइड र अन्य पावर ट्रान्समिशन फ्लुइडहरू सामान्य अपरेसनको क्रममा फरक डिग्रीको कतराहरूको शक्तिमा पर्दछन्, जसले चिप्सिपेत परिवर्तन गर्दछ र कार्यकुशलतामा पछिल्लो कमी आउँछ। हाइड्रोलिक फ्लुइडको चिपचिपी अनुक्रमणिका सुधार गर्न, पोलिमर (जस्तै कंघी पोलिमर) लाई त्यस्ता हाइड्रोलिक फ्लुइडहरूमा थपिन्छ। ASTM D5621 परीक्षण अल्ट्रासाउन्ड-उत्पन्न शियर सेनाहरु, तथाकथित ध्वनि कतरन कम्पनहरु को संपर्कमा बहुलक-युक्त तरल पदार्थ मा चिपचिपापन परिवर्तनहरु परीक्षण गर्दछ।
अनुप्रयोग: यो ASTM D5621 मानक प्रोटोकलको लक्ष्य कतरनी तनाव अन्तर्गत नमूनाको चिपचिपनता निर्धारण गर्न हो। यो परीक्षण हाइड्रोलिक तरल पदार्थको लागि प्रासंगिक छ किनकि हाइड्रोलिक तरल पदार्थहरूको रूपमा पावर ट्रान्समिशन फ्लुइडहरू कतरमा देखा पर्दछ। निश्चित कतरनी अवस्थाहरू अन्तर्गत तिनीहरूको व्यवहारलाई निश्चित मेसिनहरू र ईन्जिनहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्त हाइड्रोलिक फ्लुइड गुणस्तर छनौट गर्न आदेशको निर्धारण गर्नुपर्दछ।
प्रक्रिया: हाइड्रोलिक फ्लुइडको प्रारम्भिक चिसोपन निर्धारित गरिन्छ। नमूनालाई त्यसपछि टेस्ट बेकरमा राखिन्छ, टेम्प्चर टेम्परमा टेम्पर्ड हुन्छ र परीक्षणको लागि तोकिएको समयको लागि अल्ट्रा-सोनिक कम्पनरको (अर्थात्, सोनिक शियर उपकरण) उपचार गरिन्छ। पछि, Sonated नमूना को चिपचिपापन मापन छ। प्रतिवेदनले प्रारम्भिक चिसोपन, अन्तिम चिसोसिटी र सेन्टिस्टोकमा विस्कोसिटी परिवर्तनको प्रतिशत सूचीबद्ध गर्दछ।
अल्ट्रा-सोनिक शियर प्रणाली UP400St (24kHz, 400W) ASTM D5621 को लागि हाइड्रोलिक फ्लुइड्स को ध्वनि कतरण स्थिरता
हाइड्रोलिक तरल पदार्थको ध्वनि कतरन स्थिरताको लागि ASTM D5621 मानक परीक्षण विधिको लागि उपकरण
ASTM D5621 प्रोटोकलमा वर्णन गरिएको र मानकीकृत प्रक्रिया कार्य गर्नको लागि, निर्दिष्ट उपकरण आवश्यक छ।
अल्ट्रा Sonicator: एक निश्चित आवृत्ति र अल्ट्रा-सोनिक सी hornको साथ प्रोब-प्रकार अल्ट्रा-सोनिक शियर उपकरण (प्रोब वा Sonotrode पनि भनिन्छ)। ASTM D2603 परीक्षणको लागि प्रयोग गरिएको एक सामान्य अल्ट्रासोनिक उपकरण हो UP400St (24kHz, 400W) अल्ट्रासोनिक प्रोब (सी horn / Sonotrode) S24d22 को साथ।
एकसमान प्रदर्शन र दोहोरिने योग्य परिणामहरूलाई सजिलो पार्न, निम्न सहायक उपकरणहरू सिफारिस गरिएको छ:
पानी / हिउँ स्नान: चिसो पानी नुहाउने वा आइस स्नान0डिग्री सेल्सियस को ज्याकेट तापमान कायम गर्न सक्षम।
तापमान सेन्सर जस्तै PT100 (अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू UP400ST सँग समावेश गरीएको)
ग्रिफिन m० मिटर बीकर, बोरोसिलिकेट गिलासबाट बनेको।
ध्वनी घेरा (वैकल्पिक): ध्वनि सुरक्षा बक्स (उदाहरणका लागि ध्वनी सुरक्षा बक्स SP4-L UP400St को लागी) अल्ट्रा-सोनिक हर्नलाई संलग्न गर्न ध्वनि कतरनी उपकरण द्वारा उत्पादित आवाज स्तर कम गर्न।
आगंतुक: परीक्षण विधि D445 को आवश्यकताहरू पूरा गर्न कुनै भिसेक्टर र नुहाउने पर्याप्त छन्।
ASTM D6080 लाई अनुरूप सोनिक शियर टेस्ट
“हाइड्रोलिक फ्लुइडको लागि चिपचिपाहट वर्गीकरण प्रणाली ASTM D6080 मा परिभाषित गरिएको छ। D6080 वर्गीकरण प्रणाली मल्टिग्रेड हाइड्रोलिक फ्लुइड्स (एएसटीएम D5621) को चिपचिपाहट ग्रेड परिभाषित गर्न को लागी पछि हाइड्रोलिक फ्लुइड को ध्वनि कतरन स्थिरता को लागी ASTM D5621 मानक परिक्षण विधि प्रयोग गर्दछ। D5621 प्रक्रियामा, बहुलक युक्त तेल 40 मिनेट को लागी एक ध्वनी थरथर कालो द्वारा विकिरित छ। ध्वनि विधिद्वारा बहुलकको गिरावट तरल भित्र शक्त शून्य गठन र पतनको परिणाम हो, जस्तै तरल पदार्थ गुहाको अवस्थाहरूमा हुन सक्छ। स्थायी चिपचिपापन हराउने निर्धारणको लागि यो विधि फ्यान, गियर, र पिस्टन पम्प अनुप्रयोगहरूमा देखीएको जस्तै चिपचिपा परिवर्तनहरू फेला पार्न सकिन्छ। पम्प भोल्युमेट्रिक दक्षताका साथ सम्बन्ध पनि रिपोर्ट गरिएको छ। ध्वनि-शीयर परीक्षणमा कम स्थायी चिपचिपापन क्षति प्रदर्शन गर्ने उच्च-VI तरलहरूले बृद्धि पम्प भोल्युमेट्रिक दक्षता प्रदान गरे।” (माइकल एट अल।, २०१))।
माइकल एट अल। (२०१)) ले यो पत्ता लगायो कि यस विशेष अनुसन्धानको लागि, एएसटीएम D5621 विधि मार्फत ध्वनि कतरन परीक्षण, टेस्ट स्निग्सिटी मापनको अन्त्यसँग उत्तम सम्बन्ध राख्दछ।
किन हिल्सचर अल्ट्रा Sonicators शियर स्थिरता टेस्ट को लागी ASTM D5621 अनुसार?
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले एएसटीएम D5621 र ASTM D2603 को अनुसार कतरन स्थिरता परीक्षणहरूको लागि उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक कतर उपकरणहरू आपूर्ति गर्दछ। एक निश्चित आवृत्तिको साथ, भरपर्दो अल्ट्रासोनिक शियर पावर, हिल्सचर अल्ट्रा-सोनिक कतरन उपकरणहरू हाइड्रोलिक तरल पदार्थको कतरणीय स्थिरता मूल्यांकनको लागि आदर्श हो। Hielscher अल्ट्रासोनिकेटर स्मार्ट सफ्टवेयर र सेटिंग्स संग सुसज्जित छन्, जो ASTM मापदण्ड अनुसार परिष्कृत परीक्षणको लागि अनुमति दिन्छ। मेनू डिजिटल टच डिस्प्ले वा ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोल मार्फत सजीलो पहुँच योग्य हुन्छ। जबकि फ्रिक्वेन्सी निश्चित गरिएको छ, जुन भरपर्दो Sonication परिणामहरू र ASTM मानकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, आयाम ठीक एक चाहिएको स्ट्रोक प्रभावमा सेट गर्न सकिन्छ।
कपाल स्थिरता परीक्षणको लागि हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स उपकरणहरू दुबै, ASTM D-5621 र ASTM D-2603 मापदण्डहरू अनुरूप छन्।
ASTM D5621 भिस्कोसिटी शियर टेस्ट सुविधाका लागि हिलस्चर अल्ट्रासोनिकेटरहरू:
UP400St को २kkHz को निश्चित आवृत्ति छ र ASTM D5621 अनुरूप छ। ASTM D5621 परीक्षणको लागि एक विशिष्ट सेटअप अति (Son / Sonotrode) S24d22 सहित UP400ST अल्ट्रा-सोनिक शियर प्रणाली हो।
कृपया अल्ट्रा-सोनिक कतरन प्रणाली, ASTM D5621 अनुप्रयोगहरू र मूल्यहरूको बारेमा थप जानकारी अनुरोध गर्न तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईंसँग तपाईंको ASTM परीक्षण आवश्यकताहरू छलफल गर्न र तपाईंलाई अल्ट्रा-सोनिक कतरनी उपकरण तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रस्ताव गर्न खुशी हुनेछौं!
ASTM D5621 का अनुप्रयोगहरू
सोनिक कतरनी उपकरणका लागि विभिन्न प्रकारका सोनोट्रोड (प्रोब / सी hornहरू) UP400St, जुन हाइड्रोलिक फ्लुइड्स को ध्वनि कतरण स्थिरता को लागी ASTM D5621 मानक परिक्षण विधि को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाइड्रोलिक फ्लुइड र स्नेहक को Viscosity Properties
तरल र स्थिर स्नेहक को भौतिक विशेषताहरु डाटा द्वारा वर्णन गरिएको छ, जुन प्राय: मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकल मार्फत निर्धारण गरिन्छ।
लुब्रिकन्टहरूका लागि दुई प्रमुख नियन्त्रण प्यारामिटरहरू छन्:
नियन्त्रण मूल्य: ताजा स्नेहकहरूको परीक्षणको साथ, उत्पादन र वितरण प्रक्रियाहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सञ्चालनको बेला तेल भर्न भोल्युमको निरन्तर अनुगमन (प्रयोग गरिएको तेलहरू) तेलको खराबीले मेशिनलाई क्षति पुर्‍याउनु अघि (तेल निषेध गर्ने) शीघ्र कार्य (तेल परिवर्तन) लाई अनुमति दिन्छ।
उपयुक्तता मान: उपयुक्तता मानहरूले तिनीहरूको प्रयोग र विशेष मेशिनहरूसँग अनुकूलताको लागि स्नेहकहरूलाई दर दिन्छ।
स्नेहक र हाइड्रोलिक तेलको परिभाषा
लुब्रिकन्टहरू तरल पदार्थ हुन्, जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ – यसको प्रकृति को निर्भरता मा – गर्मी हटाउन र मलबेज लगाउन, सम्पर्कमा additives आपूर्ति, विद्युत प्रसारण, सुरक्षा, र / वा सील गर्न।
हाइड्रोलिक तेल वा हाइड्रोलिक तरल पदार्थ एक प्रमुख प्रकारको तेल वा स्नेहक (ल्युब) हुन्, जुन उद्योगमा तथाकथित औद्योगिक तेलहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हाइड्रोलिक तेल एक विशिष्ट प्रकारको स्नेहक हो। यसको मतलब यो कि एक हाइड्रोलिक तेल केवल एक लुब्रिकन्ट मात्र हो, एक हाइड्रोलिक तेल पनि माध्यम हो जुन द्वारा हाइड्रोलिक प्रणाली भरमा स्थानान्तरण गरिन्छ। यसको मतलब, यो एक लुब्रिकन्ट हो र एकै साथ पावर ट्रान्सफर माध्यम हो। एक प्रभावी र भरपर्दो स्नेहक हुनको लागि, हाइड्रोलिक तेलले विभिन्न गुणहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ, जुन तुलनात्मक वा अन्य स्नेहकसँग मिल्दोजुल्दो छ। यी सामग्री गुणहरूमा पर्दछ: फोमिंग प्रतिरोध र डिगसेसिass (हावा रिलीज) गुणहरू, थर्मल, अक्सिडेटिव र हाइड्रोलाइटिक गिरावटको बिरूद्ध स्थिरता, एन्टि-वेयर प्रदर्शन, फिल्टर्टेबिलिटी, डि-इमल्सिफिकेशनको क्षमता, रस्ट र क्षरण रोकावट, र यसको प्रभावको सम्बन्धमा केहि चिपचिपाहट गुणहरू। फिल्म मोटाई मा।
हाइड्रोलिक तेल वा हाइड्रोलिक तरल पदार्थ छुट्याईयो:
खनिज तेलमा आधारित हाइड्रोलिक तरल पदार्थ
सिंथेटिक प्रेशर तरल पदार्थ
आगो प्रतिरोधी हाइड्रोलिक तरल पदार्थ
CGS एकाई Centistokes परिभाषा
कानेटिक भिस्कोसिटी प्राय: सिजीएस एकाई सेन्टिस्टोकस (सीएसटी) मा मापन गरिन्छ, जुन ०.०१ स्टोक्स (सेन्ट) को बराबर हो। स्टोक्स (प्रतीक: St) र centiStokes (प्रतीक: cSt) CGS इकाई हो। एक सेन्टिस्टोक्स (cSt) ०.०१ स्टोक्स (St) बराबर छ। एक सेन्टिस्टोक प्रति सेकेन्ड एक सेन्टीमिटर बराबर हुन्छ (सेमी २ / सेकेन्ड)–1)। एक स्टोक्स समान घन सेन्टीमिटर (g / सेमी ग्राम) मा तरल पदार्थको घनत्व द्वारा विभाजित poise मा चिपचिपापन बराबर छ–3)।